10 ahịrịokwu dị mkpirikpi nke Walt Whitman | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Encarni Arcoya | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Abụọ
Walt Whitman, onye America na-ede uri, amuru na 1819 wee nwụọ na 1892. N'oge ndụ ya niile, na mgbakwunye ịhapụ ịhapụ anyị ọmarịcha ọrụ dịka Oh, onyeisi! Onye isi m! "," Ogologo ahụ m "," ahịhịa ahịhịa " o "Abụ nke onwe m", hapụrụ ahịrịokwu ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ nke anyị nwere ike ịchọta nke ndụ dị nkenke na-akuzi n’ime nke ọ bụla n’ime ha.
E nwere ọtụtụ ndị na-ede uri bụ ndị uri ọgbara ọhụrụ ya metụtara, gụnyere ndị dị ka Ruben Dario, Wallace Stevens, DH Lawrence, Fernando Pessoa, Federico Garcia Lorca, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Wdg
Mgbe ahụ anyị ga-ahapụ gị 10 obere edemede si Walt Whitman nke na-agwa anyị ọtụtụ ihe banyere ya, àgwà ya, ya humanism ...
1 Nkebi ahịrịokwu dị mkpirikpi na ruturu
2 Ndepụta ederede banyere Walt Whitman
3 Ọchịchọ nke Walt Whitman
3.1 Nna Walt Whitman
3.2 Ebube na nyochaa ọrụ ya
3.3 Ọ ghọrọ nkwalite onwe ya nke ọrụ ya
3.4 Ndụmọdụ ahụike gbasara Walt Whitman hapụrụ
3.5 A tụbara ụbụrụ Walt Whitman na ahịhịa
4 Okwu ndi ozo ama ama nke Walt Whitman dere
Nkebi ahịrịokwu dị mkpirikpi na ruturu
“Mgbe m zutere onye ọ na-adịghị amasị m ma ọ bụ onye ọcha, onye ojii, onye Juu ma ọ bụ onye Alakụba. O zuoro m ịmata na ọ bụ mmadụ.
«Onye na-ejegharị nkeji na-enweghị ịhụnanya, na-ejegharị ka ọ na-aga ili ozu ya».
"Ọ bụrụ na m rute ebe m na-aga ugbu a, aga m eji obi ụtọ anabata ya, ma ọ bụrụ na mabataghị ruo nde afọ iri gafere, m ga-eji ọ happụ chere kwa."
«Were Roses mgbe ị nwere ike
oge na-aga ngwa ngwa.
Otu ifuru ahụ masịrị gị taa,
echi ọ ga - anwụ ... ».
«Na m na-emegide onwe m? Ee ee, m na-emegide onwe m. Ma nke ahụ? (Abụ m nnukwu, enwere m ọtụtụ).
"Maka m, oge awa ọ bụla nke ehihie na abalị, bụ ọrụ ebube a na-apụghị ịkọwa akọwa na nke zuru oke."
"Lee anya dịka ị nwere ike, enwere ohere na-akparaghị ókè n'ebe ahụ, gụọ ọtụtụ awa ị nwere ike, enwere oge na-akparaghị ókè tupu na mgbe ọ gachara."
"Enwela obi nkoropụ ma ọ bụrụ na ịchọtaghị m n'oge na-adịghị anya. Ọ bụrụ na m nọghị ebe, chọọ m n’ebe ọzọ. Ebe m ga-eche gị.
«Anyị nọkọtara ọnụ, emesịa echefuola m».
«Amụtawo m na ịnọ na ihe m masịrị ezuola».
Ndepụta ederede banyere Walt Whitman
Dị ka ị maraworị site na isiokwu m ndị ọzọ na-adịbeghị anya, a na m achọsi ike maka ikpo okwu YouTube, vidiyo ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ na-ekwu maka onye edemede anyị na-emeso. N'ebe a ka m na-eweta ihe dị mma nke m chọtara banyere Walt Whitman, a na-asụgharị ya.
Ọchịchọ nke Walt Whitman
2019 akara afọ 200 nke Walt Whitman, otu n'ime ndị na-ede uri chere na otu n'ime America kachasị mma na ọkara nke abụọ nke XNUMXth narị afọ. Otú ọ dị, dị ka mmadụ ọ bụla, e nwere ụfọdụ àgwà ndị na-eme ka ọ pụọ iche, ma ọ bụ na-adọta uche anyị.
Anyị chọrọ ịnakọta ụfọdụ ọmarịcha ịmata nke onye edemede a. Na ụfọdụ n’ime ha ga-eju gị anya ntakịrị.
Nna Walt Whitman
Walt Whitman biri site na 1819 rue 1892. E kwuru na ọ bụ "nna" nke uri ọgbara ọhụrụ na America na nwoke gbanwere abụ. Agbanyeghị, ihe enwere ike isi na uri ya, ọkachasị akụkọ autobiographical "Enwere nwatakịrị nwoke gara n'ihu" bụ na mmekọrịta ya na nna ya abụghị ihe efu.
N'ezie, akụkọ banyere ya na ọ bụ a nwoke siri ike, onye ọchịchị aka ike, ajọ omume, ikpe n’ezighi ezi na iwe. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, mmadụ nke pụrụ ime ihe ike ma ọ bụrụ na o meghị ihe ọ chọrọ. Ugbu a, anyị na-ekwu maka oge ụdị omume a zuru ebe niile n'ọtụtụ ezinụlọ na ndị nne na nna.
Ebube na nyochaa ọrụ ya
Nye Whitman, izu oke dị ezigbo mkpa. Nke ukwuu nke na ọbụnadị na ọ rụrụ ọrụ nke aka ya. Ana m agbanwe ihe mgbe niile n'ihi na echere m na m nwere ike imezi ya. Ọ bụ ya mere o nwekwara nsogbu iji mee ka a mata ihe ndị o dere.
Ọ nọgidere na-agbazi ha, na-agbanwe ha, na-agbanwe ihe. N’ezie, akwụkwọ ya bụ “Akwụkwọ osisi ahịhịa” nwere abụ iri na abụọ ma n’oge niile ọ dịrị ndụ, ọ gbanwere ha oge niile n’ihi na afọ anaghị eju ya.
Ọ ghọrọ nkwalite onwe ya nke ọrụ ya
Mgbe onye edemede dere banyere akwụkwọ ya, ọ bụ ihe kwesiri ya ime ya na onye mbụ ma jaa ihe o mere. Mana Whitman gara n'ihu. Ma ọ bụ na, na-ahụ na o nwere ọtụtụ adịghị mma reviews, ezi uche ma ọ bụrụ na anyị na-echebara na ya uri n'abụghị na "nkịtị" n'oge ahụ, o mere.
Gịnị mere? Ọfọn jiri ọrụ ya na akwụkwọ akụkọ dee ederede, n'okpuru aha ndị ọzọ, na-eto ọrụ ahụ ma na-arụ ụka na ọ dị mma mana na ha amaghị ya na amaghị ihe ọ na-efu. Na nkatọ niile ahụ dị na ya bụ akụkụ nke mbipụta ndị na-apụta n'akwụkwọ ya.
Ndụmọdụ ahụike gbasara Walt Whitman hapụrụ
Ee ee, ọ bụghị ihe anyị chepụtara. N'ezie, onye edemede a dere "Nduzi maka Ahụike Nwoke na Ahụ Ike Ya." N'ezie, ndị a bụ isiokwu onye edemede ahụ bipụtara na New York Atlas, ọkachasị na ngalaba ahụ ike ya.
O mere ya n'okpuru pseudonym Moses Velsor, otu n’ime ndị ọ na-arụbu ọrụ dị ka odeakụkọ mgbe ọ nwere nsogbu ego. Ndụmọdụ ya na-adọrọ adọrọ. Iji maa atụ, rie nri ugboro atọ n’ụtụtụ (nri ụtụtụ, nri ehihie, na nri abalị). Ma ọ kwụsịghị ebe ahụ. Ọ gwara gị ihe ị ga-eri na nke ọ bụla: anụ ọhụrụ na poteto esi nri; anụ ọhụrụ; na mkpụrụ osisi ma ọ bụ compote. Nke ahụ bụ nri ya.
Ime otu mgbatị n'ụtụtụ iji ghaa ahụ dum, na-esokarị ụmụ nwanyị anọkọ mana soro ndị enyi nọrọ, ma ọ bụ kpụọ afụ ọnụ ma yi sọks bụ ndụmọdụ ndị ọzọ onye ahụ na-ede uri hapụrụ na-egosi na isiokwu ndị ahụ.
A tụbara ụbụrụ Walt Whitman na ahịhịa
Whitman chere na ị ga-ezute mmadụ, ị ga-abanye n'ụbụrụ ya. Ikekwe ọ bụ ya mere, mgbe ọ nwụrụ, ezigara ụbụrụ ya na American Anthropometric Society. N'ebe ahụ ka ha tụlere ma tụọ akụkụ ahụ ahụ iji tụọ mmekọrịta nke ndụ onye ahụ.
Nsogbu bụ na ụbụrụ dara n’ala ma gbajie, mechaa tụfuo. Nsonaazụ nke onye ọ bụla na-ekwesịghị ịgabiga.
Okwu ndi ozo ama ama nke Walt Whitman dere
Walt Whitman hapụrụ ọtụtụ ahịrịokwu ndị amaara, dịka ndị gara aga anyị gosipụtara gị. Agbanyeghị, enwere ndị ọzọ na, n'onwe ha, dị mkpa ma dịrị ekwu ma ọ bụ edere ya n'oge dị oke mkpa na ndụ gị.
Nke ukwuu, na anyị chọrọ ịchịkọta ụfọdụ n'ime ndị ahụ, mgbe ị gụrụ ha, nwere ike ime ka usoro dị n'ime gị rụọ ọrụ. Chọrọ ịma nke ndị anyị họọrọ?
Adị m ka m dị, nke ahụ ezuola, ma ọ bụrụ na ọ nweghị onye ọzọ n’ụwa hụrụ ya, a na m enwe ọ happyụ, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla amata ya, ana m enwe ọ happyụ.
Kedu ihe iju, ọ bụrụ na ị bịa izute m ma chọọ ịgwa m okwu, gịnị kpatara na ị naghị agwa m okwu? Gini mere na m gaghi agwa gi okwu?
M na-ezute Walt Whitmans ọhụrụ kwa ụbọchị. Enwere iri na abuo n’ime ha n’elu mmiri. Amaghị m onye m bụ.
Akwụkwọ dirtiest niile bụ akwụkwọ ahụ ekpochapụrụ.
Nọnyere m na ahịhịa, hapụ isi akpịrị gị; Ihe m choro abughi okwu, ma o bu egwu ma o bu rhyme, ma obu omenaala ma obu okwu nkuzi, obuna nke kachasi nma; Naanị ịdị jụụ m masịrị, obi ụtọ nke olu gị bara uru.
Kwụsị soro m ehihie na abalị, ị ga-enweta mmalite nke uri niile, ị ga-enweta ihe ọma nke ụwa na anyanwụ ... enwere nde nde suns, ị gaghịzi ewere ihe nke abụọ ma ọ bụ nke atọ ... ma ọ bụ na ị gaghị ele anya n'anya ndị nwụrụ anwụ ... ma ọ bụ na ị gaghị eri nri na ihe nkiri dị n'akwụkwọ, ma ọ bụ na ị gaghị ele anya n'anya m, ma ọ bụ na ị gaghị ewere ihe n'aka m, gee ntị n'ebe niile ma nyochaa ha n'aka gị.
Ọdịnihu abụkwaghị nke edo edo karịa ugbu a.
Nkà nka, ebube okwu na ìhè anyanwụ nke akwụkwọ ozi bụ ihe dị mfe
Akwụkwọ ahịhịa kacha nta na-akụziri anyị na ọnwụ anaghị adị; na ọ bụrụ na ọ dị adị, ọ bụ naanị iji mepụta ndụ.
Ndị dike a na-amaghị agwụ agwụ dị oke ọnụ ahịa dịka ndị dike kachasị ukwuu n’akụkọ ihe mere eme.
Ana m eme ememme, na-abụkwara onwe m abụ. Ihe m na-ekwu banyere onwe m ugbu a, m na-ekwu maka gị, nihi na ihe m nwere bụ nke gị, atọm ọ bụla nke ahụ m bụkwa nke gị.
Ọgụ na-efunahụ n'otu mmụọ nke e meriri ha.
A na-anwale ihe a na-adịghị ahụ anya site na ihe a na-ahụ anya, ruo mgbe ihe a na-ahụ anya na-aghọ ihe a na-adịghị ahụ anya ma nwalee ya n'otu n'otu.
̀ mụtala ihe ndị ahụ n'aka naanị ndị nwere mmasị na gị, ndị dị nro ma na-achụ gị ọsọ? Youmụtabeghị ezigbo ihe n’aka ndị jikere imegide gị ma soro gị rụọ ụka?
Ihe nzuzo nke ihe ọ bụla bụ ide n'oge ahụ, ụda obi, idei mmiri nke oge a, na-ahapụ ihe n'emeghị uche, na-enweghị nchegbu gbasara ụdị gị, na-echeghị oge ma ọ bụ ebe kwesịrị ekwesị. M na-arụ ọrụ mgbe niile. Ewere m mpempe akwụkwọ mbụ, nke mbụ, ụzọ mbụ, na m dere, edere m, m dere ... Site na ịde ihe ozugbo, a na-ejide obi obi nke ndụ.
Excesszọ nke amamihe ga-abụ nkebigabiga ihe ókè. Akara nke ezigbo onye edemede bụ ike ya iji mee ka ndị maara nke ọma mara nke ọma.
Ode akwukwo apughi ime ihe obula nye ndi mmadu karia igosiputa ha na enweghi ike nke nkpuru obi ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » 10 obere edemede si Walt Whitman
Amaokwu nke ihe ma ọ bụ obere na-agụ dị ka nke a na-efu:
Nọnyere m otu ụbọchị na otu abalị
na ị ga-amata mmalite niile poems ... »
Zaghachi Victor Rivera Pasco
Alexander Pope. Afọ ncheta nke ọmụmụ ya. Iberibe ọrụ ya